Dawladda ingiriiska oo sheegtay in ay si taxadar leh u hakiysay duulimaadka kooxdii magangalyo doon ah oo dawladda Ingiriisku gayn lahayd Rwanda | dayniiile.com
Home WARKII Dawladda ingiriiska oo sheegtay in ay si taxadar leh u hakiysay duulimaadka...
Dawladda ingiriiska oo sheegtay in ay si taxadar leh u hakiysay duulimaadka kooxdii magangalyo doon ah oo dawladda Ingiriisku gayn lahayd Rwanda
Dawladda ingiriiska ayaa sheegtay in ay si taxadar leh u eegeyso eedeymaha xukun maxkamadeed oo lagu hakiyay duulimaadka kooxdii ugu horeysay ee magangalyo doon ah oo dawladda Ingiriisku gayn lahayd Rwanda habeenkii talaadada.
Diyaaradda oo la filayay in ay qaaddo ilaa iyo 7 ruux oo magan-galyo doon ahaa ayaa soo degtay kadib markii go’aan ay soo saartay maxakamadda xuquuqda aadanaha ee Yurub uu caqabad sharci ku noqday London.
Dawladdu waxay sheegtay in qorshahaan dadka lagu geynayo Rwanda uu yahay mid niyad jab ku ah kuwa dadka tahriibiya, laakiin dadka ka soo horjeeda waxay sheegeen in uu yahay mid lacag badan ku kacaya bani’aadanimadana ka baxsan.
Wasiirka arimaha gudaha ingiriiska Priti Patel ayaa sheegtay in kuwii laga reebay diyaaradda la saari doono duulimaadka xiga.
Previous articleDad ku dul socday dhuxulo dab ah si loo dhiirri galiyo ayaa isbitaal lagu dabiibayaa
Next articleCabdirashiid Janan “ Dhibkii faramaajo ayaa wali ka socda degmada Luuq iyo Diyaarad rakaab oo laga soo celiyay maanta.
Hoggaamiyaha TPLF oo shacabka Tigray ugu baaqay Dagaal ka dhan ah...
Puntland oo Maanta xukun dil toogasho ah ku fulisay Nin dil...